/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/ဝက်ခြံများအတွက်ကုန်ကြမ်း Isotretinoin (Accutane): Isotretinoin နှင့်အတူဝက်ခြံကုသခြင်း
အပေါ် Posted 02 / 01 / 2019 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
Isotretinoin တစ်ဦး Ultra-ထိရောက်သောဝက်ခြံကုသမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်, သင် isotretinoin ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, isotretinoin အသုံးပြုမှု, isotretinoin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်သောက်သုံးသောနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအစီအမံများအပါအဝင်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအခြားအချက်အလက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Isotretinoin (Accutane) ကဘာလဲ?
သငျသညျ၏ search အတွက် Are ကုန်ကြမ်း isotretinoin (Isotretinoin 4759-48-2)? ကောင်းပြီ, သင်ကအကျွမ်းတဝင်မဟုတ်အမှု၌, Isotretinoin တစ်ဦးခိုင်ပါးစပ်ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်း isotretinoin အသုံးပြုမှု, ဆေး nodular ဝက်ခြံသို့မဟုတ် cystic ဝက်ခြံ disfiguring, ပြင်းထန်၏ကုသမှုနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည်။
ကဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ Isotretioin မှကြွလာသောအခါ, ကုန်ကြမ်း isotretinoin အခြေခံအားဖြင့် 13-CIS-retinoic အက်ဆစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလိမ္မော်ရောင်တောက်ပမှုန့်တစ်အဝါရောင်အဖြစ်လာ 300.44 တစ်ဦးမော်လီကျူးအလေးချိန်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ retinoic အက်ဆစ်အဖြစ် retinol (ဗီတာမင် A) နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။
Wဦးထုပ် cystic ဝက်ခြံဖြစ်သနည်း
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သငျသညျ cystic ဝက်ခြံသောအရာကိုအံ့ဩနေကြတယ်။ တစ်ဦးက cystic ဝက်ခြံ တစ်ဦးရောဂါကူးစက်နှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်ပေါ်စေပိတ်ဆို့အသားအရေပေါက်ထဲကနေရလဒ်များအရာဝက်ခြံတစ်ဦးပြင်းထန်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ လူအတော်များများ, 80 နှင့် 11 နှစ်အကြားအသက်သူတို့၏အမျိုးအခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 30 ရာခိုင်နှုန်းကဝက်ခြံကနေဆငျးရဲခံရပေမယ့်သူတို့ထဲကတစ်ခုသာသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းပုံမှန်အတိုင်းဝက်ခြံထက်ပိုမိုပြင်းထန်သော cystic ဝက်ခြံရှိသည်။
တစ်ခုကဝက်ခြံ cyst ပုံမှန်ဝက်ခြံထက်များသောအားဖြင့်ပိုကြီးပြီးပိုရောင်သည်နှင့်သင်ဝက်ခြံများအတွက်အချို့ကုသမှုယူပင်ပြီးနောက်ပျောက်မသွားပေလိမ့်မည်။ တစ်ဦးက cystic ဝက်ခြံနာကျင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အများအားဖြင့်နက်ရှိုင်းတဲ့အမာရွတ်နောက်ကွယ်မှအရွက်ပေးနိုင်သည်။
ဒီတစ်ခါလည်းသင့်ရဲ့ဝက်ခြံကြောင့်ဖယ်ရှားပစ်ရရန်သင့်မရေမတွက်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရှိနေသော်လည်းပွားနေဆဲဖြစ်သည်။ သငျသညျပြန့်ပွားတစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်တူ synonym အဘို့အကြည့်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ အဆိုပါအသုံးအနှုန်းရိုးရှင်းစွာဤကိစ္စတွင်အတွက်တစ်ခုခု၏ပမာဏအတွက်လျင်မြန်စွာတိုး, ဝက်ခြံကိုဆိုလိုပါတယ်။ ဒီတော့ပြန့်ပွားတစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်တူ synonym မြှောက်, ပြန့်ပွားခြင်းသို့မဟုတ်တင်းမာမှုသည်။
အမှု၌သင်တို့တစ် cystic ဝက်ခြံသို့မဟုတ်ဝက်ခြံ cyst ဆက်ဆံဖို့ထိုကဲ့သို့သောပါးစပ်ပဋိဇီဝဆေးနှင့်အထူးထူးအပြားပြားလိမ်းဆေးအဖြစ်ရှိသမျှသည်အခြားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကြိုးစားခဲ့ကြပေမယ့်အချည်းနှီး, Isotretinoin အများဆုံးဖွယ်ရှိအဆုံးစွန်ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးကိုလည်းဆရာဝန်၏ထောက်ခံချက်ပေါ် မူတည်. အခြားသောအသားအရေအခြေအနေများများအတွက်ကုသမှုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Isotretinoin တစ်ဦး retinoid မူးယစ်ဆေးကြောင့်လည်း၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်အမည်များအားဖြင့်လူသိများသည်တစ်ဒြပ်ဗီတာမင်အေ၏ထုတ်ကုန်သည်:
အပြင်, Isotretinoin ဖြစ်ကောင်း, သင်သည်အံ့သြနေကြတယ်, ကိုအသုံးပြုသည် "ဘယ်လို Accutane အလုပ်သနည်း" ဘာကြောင့်အဲဒါကိုအချို့ပဋိဇီဝဆေးနှင့်လိမ်းဆေးမပေးနိုင်ဘာလုပ်နိုင်အောင်တန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံသလဲ?
ကောင်းပြီ, ဒီမှာမေးခွန်းရဲ့အဖြေတစ်ခုရှင်းပြချက်ရဲ့ '' Accutane ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပါသလဲ ''
အလားတူပင်အခြားအ retinoid မူးယစ်ဆေးဝါးများရန်, Isotretinoin လုပ်ဆောင်ချက်များကို သင့်ရဲ့ DNA ကိုကူးယူပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ယင်းအပြောင်းအလဲတချို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား၏လျှော့ချရေးအဖြစ်ဆိကြည်ဂလင်းများထုတ်လုပ်မှုသည်။
သငျသညျ Isotretinoin ယူသည့်အခါက sebum ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိနေသောသင့်ရဲ့အသားအရေရဲ့ဆိကြည်ဂလင်းလျော့သွားတယ်။ Sebum တစ်ဦးအဆီပြန်ပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်ပါသည်နှင့်၎င်း၏အလွန်အကျွံထုတ်လုပ်မှုထိုကဲ့သို့သောဝက်ခြံအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအသားအရေပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
ထွက်စီးဆင်းရာမှအရေပြားကရေနံတားဆီးအဆိုပါအလွန်အကျွံ sebum လုပ်ကွက်ပုဆိကြည်ဂလင်း။ ဒါဟာအရေပြားအောက်ရေနံများစုစည်းနေခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ cystic ဝက်ခြံ (ဝက်ခြံ vulgaris) ဖြစ်ပေါ်စေသည့်ဘက်တီးရီးယား sebum ၎င်းတို့၏အစားအစာဖြစ်ပါတယ်ကဲ့သို့သောအခြေအနေတွင်ရှင်သန်လေ့ရှိပါတယ်။
ဝက်ခြံ vulgaris သင့်ရဲ့အသားအရေအတွက် sebum အပေါ်အစာကျွေးတဲ့အခါသူတို့ကစွန့်ပစ်ထုတ်ကုန်အဖြစ်ဖက်တီးအက်ဆစ်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ဓာတ်မနှင့်အက်ဆစ်ဟာဆိကြည်ဂလင်းစိတ်ဆိုးသူတို့ကိုရောင်ရစေ။ အရေပြားအစက်အပြောက်လည်းရလဒ်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။
Isotretinoin ပုဆိကြည်ဂလင်းကျုံ့လာသောအခါဒါကြောင့်, ၎င်းတို့၏ sebum ထုတ်လုပ်မှုပမာဏကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ်အဆိုပါ sebum အားဖြင့် cores ၏ပိတ်ဆို့မှုအဖြစ်ကောင်းစွာလျော့ချဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်ခြံ, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲဝက်ခြံ, ထိုစဉ်းစားအများအားဖြင့်ဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကသူတို့ကိုထိန်းချုပ်ထား, sebum ခြင်းဖြင့်အသားအရေပေါက်ပိတ်ဆို့မှု၏ရလဒ်အဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါဟာဆိကြည်ဂလင်း၏ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးဒါ, ဘက်တီးရီးယားအရေ၌ရှင်သန်ရန်အဘို့အအနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးလည်းအသားအရေရောင်ရမ်းလျော့နည်းစေသည်။ ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးလည်းဆိကြည်ဂလင်းသို့ပယ်သွန်းလောင်းခဲ့ကြသောဆဲလ်၏စေးကပ်လျော့နည်းစေသည်။ ဤသည် blackheads နှင့် whiteheads ဖွဲ့စည်းရန်သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုလျော့ကျစေပါတယ်။
Isotretinoin 4759-48-2 အထူးသဖြင့်ပဋိဇီဝဆေးနှင့်လိမ်းဝက်ခြံဆေး၏အသုံးပြုမှုကိုအချည်းနှီးပြန်ဆိုထားပြီးဘယ်မှာပြင်းထန်ဖြစ်ပွားမှုများအတွက်, ခြောဆုံးစွန်ဝက်ခြံကုသမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်ခြံများအတွက်ကုသမှုအဖြစ် Isotretinoin အကြောင်းကိုတစ်ခုမှာကြောက်မက်ဘွယ်အရာသင်တို့သည်နောက်ကိစ္စသူတို့ဘယ်လိုပြင်းထန်, သင့်ဝက်ခြံမှနှုတ်ဆက်ပြော 16 ရက်သတ္တပတ်ဖို့အချိန်ပဲတိုတောင်းတဲ့သက်တမ်း, ဖြစ်ကောင်း 20 များအတွက်အသုံးပြုရန်ရန်ရှိသည်အံ့သောငှါဖြစ်၏။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သင့်အရေပြားကိုသင့်ဝက်ခြံအပြည့်အဝရှင်းလင်းရေးဘို့ရန်အလားတူကြာချိန်ကုသတစ်စက္ကန့်သင်တန်းအကြံပြုလိမ့်မည်။ ဒါဟာသင်အနေနဲ့တိုးချဲ့ကာလအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်သုံးစွဲဖို့သို့မဟုတ်ပင်အစဉ်အမြဲပင်လယ်အော်မှာဝက်ခြံကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်သောအခြားဝက်ခြံမူးယစ်ဆေးအများစုနဲ့မတူဘဲဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျကုသမှု Isotretinoin သင်တန်းနှင့်အတူပြုတစ်ချိန်ကသင်သည်နောက်တဖန်ဝက်ခြံရဖို့အတှကျကရှားပါးင်ပေမယ့်, သင့်အသားအရေပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအထူးကုသင့်ရဲ့အသစ်ဝက်ခြံ-အခမဲ့အသားအရေများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်လိမ်းဝက်ခြံဆေးမှပြောင်းလဲရန်သင့်အားအကြံပေးလိမ့်မည်။
တဦးတည်း Accutane ရလဒ်များကိုမြင်နေစတင်ရန်အဘို့အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးယူပါသလဲ?
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်၏ဆန့်ကျင်ဘက်သောကြောင့်ထိုသို့အကြောင်းကိုကြားသိဖူးဘူးဆိုပါကဤသည်အံ့အားသင့်အားဖြင့်သင်တို့ကိုယူစေခြင်းငှါ,; သင့်ရဲ့ဝက်ခြံ Isotretinoin ယူ စတင်. အပေါ်သို့ပိုဆိုးဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။ ဟေ့! သေးထွက်မှမထင်မှတ်မနေပါနဲ့!
သို့သော်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ရန်စတင်ပါလိမ့်မယ် Accutane ရလဒ်များကို7သင်၏အထဲမှာကုသမှုသင်တန်း 10 ရက်။ သင့်ရဲ့ဝက်ခြံကာလအတွင်းတဖြည်းဖြည်းလျော့ကျလာစတင်ပါလိမ့်မည်။
အများအားဖြင့်, အပြည့်အဝသို့မဟုတ်အနီး-အပြည့်အဝဝက်ခြံရှင်းလင်းခြင်းကုသမှုသင်တန်းရက်သတ္တပတ် 16 မှ 24 အတွင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သင်သင်တန်းနှင့်အတူမှတဆင့်ရှိပါတယ်ပြီးတာနဲ့သင်ကအလွန်အမင်းဖြစ်နိုင်သည်တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားကာလအတွက်ဝက်ခြံ-အခမဲ့ဆက်လက်တည်ရှိပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးနှင့် relapse ကုသမှုသင်တန်းအပြီးသတိထားမိနေသည်မထွက်ရတစ်ထပ်သင်တန်းသာကိစ္စများတွင်အကြံပြုသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, တစ်ထပ်သင်တန်းသာကအနည်းဆုံး 8 ရက်သတ္တပတ်ယခင် (ကနဦး) သင်တန်း၏နောက်ဆုံးတစ်နေ့ပြီးစတင်ရပါမည်။ ဝက်ခြံကနဦးသင်တန်းအပြီးကြောင်းကာလအတွင်းတိုးတက်စေရန်ဖွယ်ရှိသည်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။
Accutane (Isotretinoin) ပါးစပ် 10-မီလီဂရမ်, 20-မီလီဂရမ်အဖြစ် 40-မီလီဂရမ်ပျော့ gelatin တောင့၌ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဆေးတောင့်တွင်ပါရှိသောဒြပ်စင်သွင်းကုန်, butylated hydroxyanisole, ပဲပုပ်ဆီ, edetate disodium, ဟင်းရွက်ဆီအဖြစ် hydrogenated ပဲပုပ်ရေနံအလွှာ hydrogenated ပါဝင်သည်။
isotretinoin 10mg တစ်ခုချင်းစီ, isotretinoin 20mg နှင့် isotretinoin 40mg ဆေးတောင့်ကွဲပြားခြားနားသောဆိုးဆေးစနစ်များရှိသည်။ Isotretinoin 10mg သံအောက်ဆိုဒ် (အနီ) နှင့်တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် features 20mg FD & C ကအဝါရောင်အမှတ် 3, D & C Yellow အမှတ် 1 နှင့်တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဆိုးဆေးရှိပါတယ်စဉ် 40mg FD & C ကနီအမှတ် 6, FD နှင့် C အပြာရောင်အမှတ် 10 ရှိပါတယ်, နှင့်တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုက် စနစ်များကို။
10 မီလီဂရမ်အဝါရောင်နေစဉ် 20mg အလင်းပန်းရောင်အရောင်အတွက်လာအရပ်သားပါပဲဘာသာစကား isotretinoin ခုနှစ်, 40, ကြက်သွေးထဲမှာ MG ။
Isotretinoin သောက်သုံးသော ကွဲပြားခြားနားသောလူနာတွေအတွက်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒါကြောင့်သင်က၎င်း၏တံဆိပ်ပေါ်တွင်အသုံးပြုမှုညွှန်ကြားချက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်၏ဆေးညွှန်းအတိုင်းလိုက်နာအရေးကြီးပါသည်။
လက်မ၏အုပျခြုပျသင့်ရဲ့ကနဦး isotretinoin ထိုးသင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်, သင်မူးယစ်ဆေးအဖြစ်ဆေးဝါး၏ခွန်အားကို အသုံးပြု. ထားတဲ့များအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါတယ်။
အနည်းဆုံးအား 12 နှစ်ရှိပြီနေသောလူကြီးများနှင့်လေးတွေအဘို့, ပျမ်းမျှနေ့စဉ်ထိုးခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ကီလိုဂရမ် (ကီလိုဂရမ်) နှုန်းမီလီဂရမ် (မီလီဂရမ်) 0.5 မှ 1 ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဟာကိုသင့်ဆရာဝန်အကြံပြုကြောင်းဆေးထိုး, တနပ်စာနှင့်အတူအခါတိုင်းယူရပါမည်။
Isotretinoin ထိုးနှစ်ခုကွဲပြားဆေးများအဖြစ်ယူတတ်ခြင်းနှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောလူနာ 15 ရက်သတ္တပတ်မှ 20 အဘို့ယူသင့်ပါတယ်။ အသက် 12 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ငယ်တဲ့သူကလေးတွေအဘို့, သူတို့ရဲ့သောက်သုံးသောသူတို့ရဲ့ဆရာဝန်ကဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ဆရာဝန်သင်တစ်ဦး 0.5 mg / kg / နေ့ isotretinoin ထိုးပြဋ္ဌာန်းထားလျှင်, ထိုသေချာပေါက်သင်ကုသမှုသင်တန်းတစ်လျှောက်လုံးကြောင်းထိုးသုံးပြီးပါလိမ့်မယ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ မူးယစ်ဆေးရန်သင့်တုံ့ပြန်မှုအပေါ် မူတည်. အထူးသဖြင့်ဝေးသင့်ရဲ့ cystic ဝက်ခြံ၏ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်လက်တွေ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်သက်ဆိုင်ရာကြသည်အတိုင်း, သင်တို့၏ဆရာဝန်ဆေးထိုးချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
ဤတွင်ပျမ်းမျှ Isotretinoin 4759-48-2 ဆေးညွှန်းခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်သည်နှင့်အညီများမှာ
စုစုပေါင်းမီလီဂရမ် / နေ့
ကီလို အလေးချိန်ပေါင် 0.5 ကီလို MG 1 ကီလို MG2မီလီဂရမ်နှုန်းကီလိုဂရမ် *
သို့သော်ဆေးထိုးထောက်ခံချက်အကွာအဝေးမှအထူးခြွင်းချက်ရှိပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်၎င်းတို့၏ကျောအပေါ်ထင်ရှား scaring သို့မဟုတ် nodular ဝက်ခြံဖြစ်စေတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ cystic ဝက်ခြံနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူ (Isotretinion) myorisan ၎င်းတို့၏သည်းခံစိတ်အပေါ်မူတည်ပြီး 2.0 mg / kg / နေ့အများဆုံးအားဖြင့်ညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
Accutane (isotretinoin) အစားအစာနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်။ ဒါဟာသင်ဆေးဝါးအများဆုံးထိရောက်မှုသေချာစေရန်ချက်ချင်းမုန့်ညက်သို့မဟုတ်ရေစာပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှထိုးယူကြောင်းအကြံပြုလိုတယ်ပါပဲ။
အစားအသောက်နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးယူပျက်ကွက်သိသိသာသာခန္ဓာကိုယ်ကယင်း၏စုပ်ယူမှုလျော့ချပါလိမ့်မယ်။ သင့်ဆရာဝန်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့အထက်သို့သင့်ရဲ့ထိုးညှိမတိုင်မီထို့ကြောင့်, သငျသညျအစာကိုညွှန်ကြားချက်နှင့်သင်၏လိုက်နာမှုနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းထုတ်လိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင်သင်, ကြိတ်ခွဲဖဲ့ဝါးသို့မဟုတ်ပါကနို့စို့ခြင်းမရှိဘဲ Accutane ဆေးတောင့်တပြင်လုံးကိုမျိုချသင့်ပါတယ်။ အပြင်, သငျသညျရေအပြည့်အဝဖန်နှင့်အတူကမျိုမှထင်နေကြသည်။
Isotretinion ၏တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းသင်တန်း cystic ဝက်ခြံအပြည့်အဝသို့မဟုတ်နာတာရှည်လွှတ်မှုမှသက်သေပြလျက်ရှိသည်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းသင်၏အရေပြားအထူးကုဆရာကလိုအပ်သောသင်ကုသမှုဒုတိယသင်တန်းရှိသည်ဖို့အတှကျအတွေ့အမှု၌မည်သို့ပင်ဆို, ကပထမဦးဆုံးသင်တန်းအဆုံးသတ်သောနေ့ရက်ကာလကိုအပြီးအဋ္ဌတပတ်ကနေအဖြစ်စတင်ပါသင့်တယ်။
အဆိုပါ isotretinoin ဆေးညွှန်း၏ထိရောက်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့လေ့လာမှုမှာ, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဝက်ခြံ၏ကနဦးရှင်းလင်းခြင်းလှူသောတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်အောက်ပိုင်းဆေးညွှန်းတွေနဲ့ဆုတ်ခွာဘေးကင်းဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။
အဘယ်အရာကို isotretinoin ယူပြီးနေချိန်မှာရှောင်ရှားရန်
ကုသမှုသင်တန်းကာလအတွင်းနှင့်သင်တန်းအပြီးတစ်လအတွင်းမိခင်နို့တိုက်ကျွေး။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးသင်၏နို့ဖြတ်သန်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်သင့်ရဲ့ကလေးငယ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်ကိုသံသယပေမယ့်သံသယ back up လုပ်ထားဖို့အဘယ်သူမျှမသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကုသမှုသင်တန်း၏အဆုံးပြီးနောက်ဆေးဝါးနှင့်တစ်လအတွင်းယူပြီးနေချိန်မှာသွေးလှူဒါန်း။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမသင့်ရဲ့လှူဒါန်းခဲ့သောအသွေးကိုရရှိသွားတဲ့လြှငျ, သူမ၏ကလေးဆေး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အန္တရာယ်မှာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်၏မကျြနှာများမဟုတ်လျှင်အခြားအဆေးဝါးများသို့မဟုတ် Accutane (isotretinoin) ပါဝင်တဲ့ဆေးဖက်ဝင်အပင်များထုတ်ကုန်ယူပြီး။
သင့်ရဲ့ညဥ့်ရူပါရုံကို Accutane (isotretinoin) ကထိခိုက်ခဲ့ပြီးအမှု၌ညအချိန်တွင်မောင်းနှင်။
ကုသမှု၏သင်တန်းပြီးနောက် Accutane နှင့်ခြောက်လတာနေစဉ်အသားအရေကိုပိုမိုချောမွေ့များအတွက်အလှကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရယူခြင်း။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလဆန်း, dermabrasion နှင့်လေဆာရောင်ခြည်များပါဝင်သည်။ အဆိုပါဆေးဝါးသည်ဤလုပျထုံးလုပျနညျးမြားမှရရှိလာတဲ့အမာရွတ်မှသင်ပိုမိုအားနည်းချက်စေလိမ့်မည်။
တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်နှင့်ခရမ်းလွန်အလင်းထိတွေ့မှုရှိခြင်း။ အဆိုပါဆေးဝါးသည်ဤအလင်းအိမ်ရန်သင့်အသားအရေရဲ့ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
အခြားလူများနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးမျှဝေခြင်း။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, မူးယစ်ဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့ဆေးညွှန်းအပျေါမှာယူရပါမည်။
Accutane (isotretinoin) ထိုးလွဲချော်
သင်သည်သင်၏ myorisan ထိုးလက်လွတ်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျအဖြစ်မကြာမီသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်ယူသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာနီးပါးသင်၏နောက်ထိုးဘို့အချိန်အခါမည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သင်ရုံလွဲချော်ထိုးနှင့်အတူကွယ်ပျောက်လုပျနှငျ့သငျ့ကိုပုံမှန်ထိုးအချိန်ဇယားကိုပြန်လည်စတင်, ကအကြောင်းကိုအောက်မေ့ပါတယ်။ ပုံမှန်အချိန်ကလာမယ့်ဆေးထိုးယူပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ခုဆေးများယူသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှနီးကပ်လွန်းမထားပါနဲ့။
ကြောင့် Accutane ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး (isotretinoin) ငှါ, မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စျေးကွက်သီးသန့် iPLEDGE ™ဟုခေါ်သည့်အထူးကန့်သတ်ဖြန့်ဖြူးပရိုဂရမ်မှတဆင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုကအတည်ပြုသည်။
ဆေး၏သတ်မှတ်ဒီ program- iPLEDGE နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်နှင့် activated ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးအစီအစဉ်ကိုမှတ်ပုံတင်နှင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုပရိုဂရမ်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကြပါပြီမှစေ့စေ့မေးမြန်းပြီးခဲ့ကြသူလူနာတွေအတွက်သီးသန့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ iPledge ပရိုဂရမ်နဲ့ပါတ်သက်ပြီးအားလုံးဘာလဲ
iPledge အစီအစဉ်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာသေချာမှသာအရည်အချင်းပြည့်သောလူဆေးကို ယူ. ဖြစ်နိုင်ချေဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမူးယစ်ဆေးဝါးရဲ့ဆေးညွှန်းဖို့လိုက်နာမှုနှင့်သတိပေးဆောင်ရွက်မှုများ၏တင်းကျပ်သောပှဲတစျဆငျ့တတ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သောအရာတို့ကိုလစဉ်ကိုယ်ဝန်စမ်းသပ်မှုများနှင့်ကလေးမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုများပါဝင်သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအကြောင်းပိုမိုသိရန်သင့်ဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုပါ။
ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သူကိုအမျိုးသမီးလူနာ 25 mIU / mL ၏နိမ့်ဆုံး sensitivity ကိုနှစ်ခုဆီးသို့မဟုတ်သွေးရည်ကြည်ကိုယ်ဝန်စမ်းသပ်မှုခံယူဖို့ထင်နေကြသည်။ သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံး Accutane (isotretinoin) ဆေးညွှန်းကိုလက်ခံရရှိရန်အဘို့အနှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်မှုအဘို့မိမိတို့ရလဒ်များကိုအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ရပါမည်။
ကနဦးစမ်းသပ်မှုဝက်ခြံ Accutane ကုသမှုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်းထူထောင်အပေါ်သို့ Accutane (isotretinoin) ညွှန်ကြားပေးသည့်အထူးကုသဖြင့်ဆည်းပူးသည်။ ဒုတိယစမ်းသပ်မှုအဓိကအားပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုအတည်ပြုပြုနေသည်။ ဒါဟာ CLIA လက်မှတ်နှင့်အတူဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်ဖျော်ဖြေခံရဖို့ထင်နေသည်။ နှစ်ခုစမ်းသပ်မှုများအကြားကာလ 19 ရက်ပေါင်းထက်လျော့နည်းမဖြစ်သင့်ပါတယ်။
အမှု၌သင်တို့ကိုပုံမှန်ရာသီစက်ဝန်းနဲ့အမျိုးသမီး cystic ဝက်ခြံလူနာများမှာ, ဒုတိယကိုယ်ဝန်စမ်းသပ်ညာ Accutane ၏ (isotretinoin) ကုသမှုသင်တန်း၏ဖြစ်နိုင်သောစတင်ရှေ့အသောရာသီကာလ၏ပထမဦးဆုံးငါးရက်အတွင်းဖျော်ဖြေရပါမည်။ သငျသညျ 30 နေ့ရက်ကာလအဘို့ဓတေားနှစ်မျိုးအသုံးပြုကြသည်ပြီးနောက်အပြင်စမ်းသပ်မှုလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ရာသီစက်ဝန်းမမှန်ဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းသွေးထွက်ကာကွယ်မွေးထိန်းချုပ်မှု technique ကိုပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ဒုတိယစမ်းသပ်မှုချက်ချင်း Accutane ကုသမှု (isotretinoin) သင်တန်းရဲ့ start precedes တဲ့ကာလအတွင်းဖျော်ဖြေရပါမည်။ သငျသညျ 30 နေ့ရက်ကာလအဘို့ဓတေားနှစ်မျိုးအသုံးပြုကြသည်ပြီးနောက်ရုံပုံမှန်ရာသီစက်ဝန်းနှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်ဝသကဲ့သို့, ဒီစမ်းသပ်မှုလည်းလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
သငျသညျနားလညျပွီးတင်းကြပ်စွာ iPledge အစီအစဉ်၏အပေါငျးတို့သလိုအပ်ချက်များကိုအတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်မူးယစ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးများ၏အခြားဆေးညွှန်းအရအရည်အချင်းပြည့်မီမည်မဟုတ်။
ကျနော်တို့အရင်ကမြောက်မြားစွာ isotretinoin အမှတ်တံဆိပ်ရှိပါတယ်ငါသိမြင်၏။ သင်သိသင့်၏နောက်ထပ်အရာကွဲပြားခြားနားသော isotretinoin အမှတ်တံဆိပ်ကွဲပြားခြားနားအလုပ်လုပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကဲ့သို့သောမှာမူးယစ်ဆေးတစ်ခုအချို့သောအမှတ်တံဆိပ်၏တောင့ isotretinoin တခြားပုံစံတွေနဲ့အစားထိုးမရသင့်ပါတယ်။
ဥပမာ, သငျသညျ Absorica တောင့နှင့်အတူ Accutane တောင့အစားထိုးမရသင့်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, သင်သည်သင်၏ isotretinoin (Accutane) refill နှင့်သင်ကကနဦးတဦးတည်းအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံရသည်ကွောငျးတှေ့အမှု၌, သင့်ဆေးဝါးထံမှရှင်းလင်းချက်ရှာကြာလော့။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဘာတွေလဲ Accutane ၏
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီအချက်မှာသင် ", အံ့သြနေကြတယ်Accutane စိတ်ချရသနည်း"ကောင်းစွာ; မူးယစ်ဆေးဝက်ခြံများအတွက် Ultra-ထိရောက်သောကုသမှုဖြစ်ပါသည်သလောက်အတွက်ပဲမဆိုဆေးဝါးကဲ့သို့အချို့ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကအက္ခရာရန်ဆေးညွှန်းအတိုင်းလိုက်နာနှင့်တင်းကြပ်စွာကြိုတင်ကာကွယ်မှုများစောငျ့ရှောကျအထူးသဖြင့်လျှင် Isotretinoin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ဖို့ဘာမှမရှိဘူးပါပဲ။
ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဒီမှာကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပါ (dos နှင့် don'ts) အကြောင်းပိုမိုတွေ့မြင်သွားနေကြသည်။
သငျသညျ Accutane ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုစိတ်တွင်ကိုထမ်းလို့ယူဆတယ်ဖြစ်ကြောင်းနောက်ထပ်အရာဆေးယူသောသူမဟုတ်လူတိုင်းကသူတို့ကို (မလိုလားအပ်သောဆိုးကျိုးများ) တွေ့ကြုံသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သငျသညျဆေးယူပြီးရပ်တန့်သည့်အခါအပြင်မလိုလားအပ်သောဆိုးကျိုးများပုံမှန်အားဖြင့်ကွယ်ပျောက်သွားပါ။
အချို့သော Accutane ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘုံနှင့်ဒီထက်ပြင်းထန်တဲ့များမှာနေစဉ်, အခြားသူများကိုရှားပါးပြီးပိုပြင်းထန်ဖြစ်ကြသည်။ ရဲ့ Accutane ၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှာပထမဦးဆုံးကြည့်ကြပါစို့။
ဘုံ Isotretinoin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ
ဘုံ Isotretinoin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတို့ပါဝင်သည်:
ပါးစပ်, နှာခေါင်း, မျက်စိခြောက်သွေ့
အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နိုငျသျောလညျး, သူတို့ရဲ့ကွိလျော့နည်းဘုံဖြစ်ကြသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအတှေ့အကွုံကဤလေးနက်သက်ရောက်မှုယူသူကိုလူအများ၏ 0.001% ထက်တကယ်တော့, သာလျော့နည်း။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုများပါဝင်သည်:
ခြောက်သွေ့သောအသားအရေနှင့်နှုတ်ခမ်းကအရမ်းဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။ သငျသညျကိုရပ်တန့်ပြီးနောက်သင်ဝက်ခြံများအတွက်အနည်းဆုံး6လကြာ isotretinoin ယူပြီးဖွင့်စဉ်ကဒီအမာရွတ်သို့မဟုတ်အရေပြားယားယံမှုဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းအဖြစ်လုံခြုံရေးအတွက်, မဆိုလဆန်း, dermabrasion, ဒါမှမဟုတ်လေဆာအသားအရေကုသမှုမရှိကြပါဘူး။
လူအတော်များများဟာ "ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက် Accutane Is လုံခြုံ?" မေးအဖြေမရှိ၏ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမအဘို့အမှာအားလုံးအန္တရာယ်ကင်းစွာမဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများဝက်ခြံသို့မဟုတ် cystic ဝက်ခြံကုသသို့မဟုတ်သမျှမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက် Accutane သုံးစွဲဖို့အလွန်အမင်းစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ Roaccutane ကုသမှုသင်တန်းကာလအတွင်းကိုယ်ဝန်ဆောင်ရဖွယ်ရှိနေသောအမျိုးသမီးများသည်မူးယစ်ဆေးမသုံးသင့်ပါတယ်။
လုပ်ဆောင်ချက် Isotretinoin ယန္တရား၏အကျိုးသက်ရောက်မှု, မသက်ဆိုင်ဘဲမူလအဆိုပါ Isotretinoin သောက်သုံးသော၏, မွေးဖွားချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပေါ်စေသန္ဓေသားကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်လို့သတိထားဘို့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မူမမှန်သဖြင့်ထိခိုက်ခံရနိုငျသောသန္ဓေသား၏ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း / အစိတ်အပိုင်းအချို့မှာမျက်နှာ, ဦးနှောက်, နှလုံးနား, မျက်စိအဖြစ် thymus နှင့် parathyroid ဂလင်းတို့ပါဝင်သည်။
Accutane (Isotretinoin) ယူပြီးသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် (ကိုယ်ဝန်ရှိရရှိသွားတဲ့) သွေးဆောင် အကယ်. သူမသည်ချက်ချင်းမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးရပ်တန့်ခြင်းနှင့်မျိုးပွားမှုအဆိပ်အတောက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့သူတစ်ဦးသားဖွားဆရာဝန်-မီးယပ်သားဖွားသွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။
အဆိုပါအထူးကုဟာမွေးသေးသောကလေးသူငယ်လုပ်ဆောင်ချက် Isotretinoin ယန္တရားကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့လျှင်, သူ / သူမအတူတူပင်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတည်ထောင်ရန်တစ်ဦးအကဲဖြတ်လုပ်ဆောင်သွားရန်နိုင်ပါတယ်တည်ထောင်ရန်နိုငျသညျ့အဘယ်သူမျှမတိကျမှုနညျးလမျးရှိပေမယ့်။ အပြင်မိခင်ရလဒ်စိုးရိမ်စိတ်နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်သူမ၏ enable လုပ်ဖို့ဆုံးမရပါလိမ့်မယ်။
Does Isotretinoin လည်းစိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပွားစေ?
စီးပွားပျက်ကပ် Isotretinoin ၏အရှိဆုံးအငြင်းပွားဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အချို့လူများကမူးယစ်ဆေးအတွေ့အကြုံကိုစိတ်ကျရောဂါယူပြီးကြောင်းညွှန်ပြအချို့အစီရင်ခံစာများရှိပါတယ်။ သို့သော်သတ်သေအတူ roaccutane ချိတ်ဆက်မျှသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။
တကယ်မူးယစ်ဆေးစိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပွားစေဖွယ်ရှိသည်မည်မျှရှင်းပြနိုင်သူအဘယ်သူမျှမရှိတယ်။ သို့သော်အချို့သိပ္ပံပညာရှင်ဆေးဝါး serotonin များ၏ထုတ်လုပ်မှုအဖြစ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်ရသောထုံးစံနှောင့်အယှက်ဖြစ်ဖွယ်ရှိကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။
ဖြစ်နိုင်သည်ကဒီကြောက်စရာအသံပေမယ့်နှိုးဆော်သံအဘို့အဘယ်သူမျှမအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်? မည်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာ Isotretinoin အတွေ့အကြုံကိုကိုအသုံးပြုဖို့သူလူများ၏အများစု။ စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူ Isotretinoin ၏အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်တကယ်တော့မရှိသအကြွင်းမဲ့အာဏာသက်သေအထောက်အထား။ ပိုကောင်းနေဆဲ; အချို့သောလေ့လာမှုတွေနှစ်ခုအကြားဖြစ်နိုင်သော link ကိုအပေါ်သံသယန့်ပစ်ကြပြီ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အဖြစ်, သင်စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါ၏အခြားမည်သည့်ပုံစံတစ်ခုသမိုင်းများအမှု၌, သင် Isotretinoin ယူပြီးမစတင်မီသင်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးအထူးကုများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းအာမခံပါသည်။ ဒါ့အပြင်အမှု၌သင်တို့ Isotretinoin ယူပြီးစဉ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေသတ်သေအတှေးသို့မဟုတ်စိတ္တရှိဖွံ့ဖြိုး; သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု service provider ကကအကြောင်းသိစေရန်တွန့်ဆုတ်ကြဘူး။
သငျသညျသက်ဆိုင်ရာ Isotretinoin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြေရှင်းရန်လုပျနိုငျသောအရာရှိပါသည်:
Isotretinoin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ကနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်လုပ်နည်း
ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်း မှန်မှန်သည်သင်၏နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ moisturizer (အထိခိုက်မခံအသားအရေများအတွက်ပိုကောင်းရေနံ-အခမဲ့မျက်နှာ moisturizer) နှင့်တစ်ဦးနှုတ်ခမ်းဗာလစံစေး Apply
2 မိနစ်ထက်လျော့နည်းရန်သင့်ရေချိုးခန်းအချိန်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် lukewarm ရေကိုအသုံးအစားပူ
အလင်းမှတိုးမြှင့်အသားအရေ sensitivity ကို ဒါကြောင့်မိုးအုံ့င်အချိန်မှာတောင်သင့်ရဲ့အရေပြားပေါ်မှာကွာတောက်တောက်နေရောင်ကနေ Stay နှင့်မြင့်မားသောအချက်လျှောက်ထား, oil- အခမဲ့နေရောင်မုန့်။ တစ်ဦး sunlamp သို့မဟုတ် sunbeds သုံးပြီးရှောင်ကြဉ်ပါ
အပူပိုင်းမျက်စိ သင်၏မျက်စိအထူးကုသငျသညျအခြို့မျက်စိပေါက်အကြံပြုဖို့တောင်းဆိုခြင်း။ သငျသညျအဆက်အသွယ်မှန်ဘီလူးဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် Isotretinoin ယူပြီးနေချိန်မှာသူတို့မသက်မသာခံစားရကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်ဆေးဝါးယူပြီးပါလိမ့်မယ်ကာလအဘို့မျက်မှန်သူတို့နှင့်အတူအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။
အပူပိုင်းပါးစပ် / လည်ချောင်း sugarless သွားဖုံးသို့မဟုတ်သကြားလုံးဝါး။
သငျသညျမူးယစ်ဆေးသက်သာရာတစ် pain- အကြံပြုဖို့သင့်ဆေးဝါးတောင်းဆိုခြင်း။
Isotretinoin ကို Safe အသုံးပြုနည်းလား?
သုံးစွဲဖို့ Isotretinoin လုံခြုံရှိမရှိအဖြေဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်လုံးဝမဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းအပေါ်မူတည်ပါသည်။
ပထမဦးစွာအစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲဖို့တချို့လူတွေမသင့်တော်သောလုပ်ကြောင်း (ဥပမာ, ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့များပါတယ်သောသူတို့ကို) တိကျသောအခြေအနေများရှိနေပါသည်။ သငျသညျဤအခြေအနေများရှိပါကသင်သည် Isotretinoin သုံးစွဲဖို့အဘို့, ကဘေးကင်းလုံခြုံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ
အပြင်, Isotretinoin သီးသန့်ပြင်းထန် cystic ဝက်ခြံ / nodular ဝက်ခြံသို့မဟုတ်ပင်ဝက်ခြံသို့မဟုတ်ဝက်ခြံများအတွက်အခြားမည်သည့်ကုသမှုများအတွက် retinol ယူပြီးပြီးနောက်ရှင်းလင်းမည်မဟုတ်ကြောင်းနောက်ကျောသို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကျယ်ပြန့်ဝက်ခြံနှင့်အတူလူသဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ပါသည်။ အမှု၌သင်၏အဝက်ခြံအပျော့စားဖြစ်ပြီး, သင့်အရေပြားကိုသင်ဗီတာမင်ဝက်ခြံများအတွက်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ဝက်ခြံများအတွက်မဆိုအခြားဆေးပညာအတှကျအဲဒီကုသမှုနှင့်အတူအခြားအပျော့ထုတ်ကုန်အများဆုံးဖွယ်ရှိသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။
အွန်လိုင်း Accutane (isotretinoin) ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို
တစ်ထုတ်လုပ်သူ, လူနာသို့မဟုတ်ဆေးဝါးဖြစ်ကြသည် iPledge အစီအစဉ်၏အပေါငျးတို့သလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး isotretinoin ဝယ်ဖို့ဖို့လိုအပ်ပါပြီလျှင်, သင်ရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်လုပ်ရတဲ့-အခမဲ့အွန်လိုင်းရနိုင်သည်။ သို့သော်ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စျေးကွက်မှကြွလာသောအခါတစ်ဦးအတွက်အသိပေးချက်ရှိပါတယ်သတိရ; ကသာ iPledge-approved ပေးသွင်းခြင်းနှင့်ဆေးဝါးရောင်းချရပါမည်။
သငျသညျတရားဝင် isotretinoin ဖြန့်ဝေသို့မဟုတ်ရောင်းဖို့ခွင့်ပြုခံရဖို့, သင်ပထမဦးဆုံး iPLEDGE နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ပြီးလည်း isotretinoin ထုတ်ကုန်ဖြန့်ဖြူးဘို့အစီအစဉ်ကိုသတ်မှတ်အားလုံးသက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သဘောတူသင့်ပါတယ်။
လိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား, aasraw.com သငျသညျမစိုက် isotretinoin ဝယ်နိုင်ရှိရာအကောင်းဆုံးအများစုအဆင်ပြေပြေနဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများမှာလက္ကားနှင့်ဆေးဝါးမှစစ်မှန်သည့်ကုန်ကြမ်း isotretinoin နှင့် isotretinoin တောင့ရောင်း။
သင်ဘယ်လို Accutane (isotretinoin) သိမ်းထားဖို့ထင်လဲ?
Accutane (isotretinoin) (59 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 86 မှ 15 ° F ကို, 30 °မှ°) အခန်းအပူချိန်မှာအလုံပိတ်ကွန်တိန်နာထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ရပါမည်။ သင်သည်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးစောင့်ရှောက်သောအရပျဝေးအပူနှင့်တိုက်ရိုက်အလင်းထဲကဖြစ်သင့်ခြင်းနှင့်အစိုဓာတ်ကို-အခမဲ့ဖြစ်သင့်သည်။ ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးအေးခဲမဖြစ်သင့်ခြင်းနှင့်သားသမီးရဲ့လက်လှမ်းမမီထဲကထားရှိမည်ရပါမည်။
ကမရှိတော့လိုအပ်သို့မဟုတ်ခေတ်မမီတော့မယ့်လျှင်ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးစောင့်ရှောက်ကြပါဘူး။ သို့သျောလညျးပဲပဲမဆိုလမ်းကို အသုံးပြု. ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးမထင်သော်လည်း, သင့်လျော်စွန့်ပစ်ခြင်းလမ်းညွန်အဘို့သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအထူးကုနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ရဲ့ယခုဆေးဝါးကိုအသုံးပြုကြသူတချို့လူတွေတချို့ Isotretinion ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကြည့်ကြရအောင်။
ဟန္နဖြူ: "အေးဆေးတည်ငြိမ်မထားနိုငျ! နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါနှစ်ပေါင်းများစွာတမ်းတခဲ့တာတစ်ခုဝက်ခြံအခမဲ့မျက်နှာရဖို့စီမံခန့်ခွဲပါပြီ။ 12 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းငါ၏အမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကတည်းကငါပြင်းထန်ဝက်ခြံနှင့်အတူအပြင်းအထန်ခံခဲ့ရသညျ။ ငါရလဒ်သကဲ့သို့ငါ၏ Self-လေးစားမှုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ငါအားလုံးနီးပါး Anti-ဝက်ခြံထွက်ပစ္စည်းများကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်သူတို့ထဲကဘယ်သူမျှဝက်ခြံဖယ်ရှားပစ်ရနိုင်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမိတ်ဆွေတစ်ဦးငါပြုမိသော Isotretinoin ကြိုးစားကြဖို့ကျွန်မကိုအကြံပေးခဲ့သည်။ ငါနှစ်လအကြာကုသမှုပြီးစီးငါရလဒ်များကိုနှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏ဝက်ခြံရှင်းလင်းထားသည်နှင့်အနက်ရောင်အစက်အပြောက်များလွန်းကွာနွမ်းနေကြသည်။ ကျနော်ကျိန်းသေတစ်စုံတစ်ဦးကမှဒီမူးယစ်ဆေးအကြံပြုချင်ပါတယ်။ "
ကယ်လီ: ငါဝက်ခြံများအတွက် isotretinoin နှင့်အတူတက် လာ. အကြင်သူသည်ကျေးဇူးတင်လို့မရပါဘူး။ ကမူးယစ်ဆေးအဘို့ငါဆဲပြင်းထန် cystic ဝက်ခြံနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်လိမ့်မယ်မခံခဲ့ရပါ။ ငါနီးပါးဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဝန်သွားရောက်လည်ပတ်သူတို့ကို Isotretinoin (Accutane) ကိုအသုံးပြုသည်အဆင်ပြေမယ့်လျှင်ထွက်ရှာရန်ထိရောက်သော cystic ဝက်ခြံဆေးရတဲ့အပေါ်ကိုတက်ပေးခြင်းသူထွက်ရှိမည်သူမဆိုအကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဒါဟာဆေးပညာအမှန်ပင်အံ့ဘွယ်သောအမှုအလုပ်ဖြစ်တယ်, ငါစိတ်ချလက်ချကြောင်းထေူနိုင်ပါတယ်။
ဂျူလီယန်: isotretinoin ငါ့ကိုတစ်ဦးလက်မောင်းနှင့်ခြေထောက် costed ပေမယ့် "ကျွန်မငွေအများဆုံးတန်ဖိုးကိုတယ်။ ငါအဘို့အပေးဆောင်သောအရာကိုထက်ပိုတယ်နဲ့တူတကယ်တော့ငါခံစားရတယ်။ ငါသည်ငါ့ပုံမှန်အတိုင်းဆေးသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ပါလျှင်ကျွန်မသေးလိုချင်သောရလဒ်ရတဲ့မရှိဘဲပိုပြီးပိုက်ဆံကုန်ရပြီချင်ပါတယ်သေချာပါတယ်။ ကျွန်မပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝက်ခြံများအတွက်ဗီတာမင် A နှင့်အတူအခြားထုတ်ကုန်များရိုက်နှက်ခဲ့သည်ဝက်ခြံများအတွက် Accutane အကြံပြုပါသည်။ "
အမ်မလီ Hanson: "wow! လုပ်ဆောင်ချက်၏ isotretinoin ယန္တရားနှင့်ရလဒ်များကိုနှင့်အတူပျြောရှငျဖြစ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါ။ အများအပြား isotretinoin ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်, ငါမူးယစ်ဆေးငါ့အဘို့သင့်လျော်ခဲ့လျှင်တည်ထောင်ရန်တစ်ဦးဆေးဝါးသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ငါ၏အဝက်ခြံကုသမှုစံချိန်ကိုမြင်လျှင်အပျေါမှာသူကပြင်းထန်ကြီးနှင့်အမျိုးမျိုးသောကုသနေသော်လည်းရှည်လျားသောကာလအတွက်တည်မြဲမှုအဖြစ်ဝက်ခြံ isotretinoin သုံးပြီးကုသနိုင်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ငါကုသမှုသင်တန်း၏ပထမဦးဆုံး 10 ရက်သတ္တပတ်အတွင်းငါ့မျက်နှာကိုအပေါ်သိသိသာသာတိုးတက်မှုကြည့်ဖို့စတင်ခဲ့နှင့် 20th ရက်သတ္တပတ်အသုံးပြုပုံကတော့ဝက်ခြံလုံးဝရှင်းလင်းခဲ့သည်။ "
Billy Hart: ငါအီလီနွိုက်စမှာတည်ရှိပါတယ်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူလိုင်စင်နှင့် iPledge-approved ဆေးဝါးဖြစ်၏။ ငါအကြမ်းဖျင်းတစ်နှစ်အကြာ isotretinoin နှင့်ကောင်လေးတစ်ယောက်ရောင်းစတင် ... ဒါဟာမူးယစ်ဆေးတစ်ခု hotcake တူသောရောင်းချနေသည်။ ပင် iPledge လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အတူ, ငါ့လူနာမြင့်မားပါကချီးမွမ်း၏။ ကျွန်မပိုမိုနီးကပ်စွာငါ့ကိုကယူလာဘို့အ aasraw.com ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
ရှာလုံဝီလျံ: "isotretinoin ကုန်ကျစရိတ်အကြောင်းကိုစိတ်ထဲမထားပါနဲ့, ဒီမူးယစ်ဆေး cystic ဝက်ခြံကုသမှုများအတွက်ကိုမှန်ကန်သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာကျွန်မရဲ့ isotretinoin ကုသမှုသင်တန်းပြီးဆုံးနှင့်ရလဒ်များကိုနှင့်အတူပျြောရှငျမဖွစျနိုငျသောအခြိနျ မှစ. သုံးနှစ်ကြာခဲ့ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏ဝက်ခြံပျောက်သွားခဲ့ပြီးယခုတွင်ငါသည်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူထွက်ခြေလှမ်းနိုင်ပါတယ်။ "
Charlene B ကို: ပြင်းထန်ဝက်ခြံဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲ၌ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ထိရောက်မှုကိုပြိုင်ဘက်ကင်းပါပဲ။ ကျွန်မဝက်ခြံကုသမှုထုတ်ကုန်များ၏သောင်းချီကြိုးစားခဲ့ဖူးကစိတ်အညစ်အနေဖြင့်အခမဲ့ငါ့ကိုထားမှစီမံခန့်ခွဲသာ isotretinoin ပါပဲ။ ငါသည်ဤစူပါမူးယစ်ဆေးဝါးအဘို့အလွန်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
Isotretinoin ကိုမဆိုသံသယတစ်ခု Ultra-ထိရောက်သောဝက်ခြံကုသမှုထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျပွငျးထနျ cystic ဝက်ခြံသို့မဟုတ်ပင်သည်အခြားဝက်ခြံဆေးယူပြီးပြီးနောက်ရှင်းလင်းမလေးနက် cystic ဝက်ခြံနဲ့လူနာတိုကိစ္စတွင်ခုနှစ်, မူးယစ်ဆေးအလားအလာကုသမှု option ကိုဖြစ်အလွန်အမင်းဖွယ်ရှိသည်။ တဦးတည်းကဒီဆေးကိုယူပြီးအပေါ်စတင်ကြိုးပမ်းနေချိန်တွင်မတိုင်မီသို့သော်ဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်ကိုအလွန်အရေးပါသည်။ ဒါ့အပြင်လူနာနှင့်မူးယစ်ဆေးရဲ့ဖြန့်ဖြူးသူတို့ကဆေးဝါးများ၏ကိုင်တွယ်နှငျ့ပတျသကျသောသူအပေါင်းတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသေချာရပေမည်။
Wysowski, Diane K. , Joslyn Swann နှင့် Amarilys Vegas ။ "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ isotretinoin အသုံးပြုခြင်း (Accutane): 1992 မှတဆင့် 2000 ထံမှလျင်မြန်စွာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ " အရေပြားရောဂါဗေဒ၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီဂျာနယ်4 (2002): 505-509 ။
ဝီလျံ, HC, Dellavalle, RP, & နဲ့ရော, အက်စ် (2012) ။ ဝက်ခြံ vulgaris ။ the Lancet, 379(9813), 361-372 ။
Feldman, အက်စ်, Careccia, RE, Barham, KL, & Hancox, ဂျေ (2004) ။ ဝက်ခြံ၏ရောဂါနှင့်ကုသမှု။ အမေရိကန်မိသားစုသမား, 69(9), 2123-2138 ။
ဗာရက်, Y. , Wohl, Y. , Greenberg, Y. ဒါယန်း, YB, Friedman, တီ, Shoval, G. အ & Knobler, hy (2005) ။ Accutane အောက်ပါအကျိုးသက်ရောက်စေစိတ္တ (isotretinoin) ကုသမှု။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလက်တွေ့ psychopharmacology, 20(1), 39-41 ။
Stern ပာ, RS, ရို, အက်ဖ်, & Baum, C. (1984) ။ Isotretinoin နှင့်ကိုယ်ဝန်။ အရေပြားရောဂါဗေဒ၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီဂျာနယ်, 10(5), 851-854 ။
Barnes, CJ, Eichenfield, LF, Lee က, ဂျေ, & Cunningham, BB (2005) ။ မွေးကင်းစကလေးများဝက်ခြံများအတွက်ပါးစပ် isotretinoin ၏အသုံးပြုမှုများအတွက်တစ်ဦးကလက်တွေ့ကျတဲ့ချဉ်းကပ်နည်း။ ကလေးအရေပြား, 22(2), 166-169 ။
Kilcoyne, RF, ကိုင်တွယ်, R. , Cunningham, ဒဗလျူ, Nardella, အက်ဖ်အေ, Denman, အက်စ်, ဖရန့်, တီဂျေ, & Hanifin, ဂျေ (1986) ။ အနိမ့်ထိုး isotretinoin ကုထုံးနှင့်အတူအနည်းဆုံးကျောရိုး hyperostosis ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဒီယိုရောင်ခြည်ကုသမှုပညာ, 21(1), 41-44 ။
24200 Views စာ
ကာယဗလ, သောက်သုံးသောနှင့်သံသရာအတွက်ကုန်ကြမ်း Proviron (Mesterolone) Trenbolone Enanthate Powder အကြောင်းအားလုံးအဆိုပါအရာ